Salamo 38 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
[Fivavak'izay ory dia ory indrindra] Salamo nataon'i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.
Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipìkanao,ary manindry ahy mafy ny tananao,
Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao; tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako.
Fa ny heloko efa mihoatra ny lohako; tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako.
Maimbo sady mihady ny feriko noho ny hadalako.
Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho, ary misaona mandrakariva.
Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko.
Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho noho ny fitolokon'ny foko.
Ry Tompo ô, eo anatrehanao ny faniriako rehetra;ary ny fisentoako tsy mba miafina aminao.
Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan'ny masoko aza efa nandao ahy.
Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriako; Ary ny havako mijanona eny lavitra eny.
Mamela-pandrika izay mitady ny aiko; ary izay mitady hanimba ahy miteny fanimbana,sy misaim-pitaka mandrakariva.
Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava;
Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany.
Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô.
Fa hoy izaho: sao dia hifalian'izy ireo anie aho;ary raha mibolisatra ny tongotro, dia hirehareha amiko izy.
Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaintainako dia tsaroako mandrakariva.
Fa ny heloko no hambarako; matahotra aho noho ny fahotako. [Na: Malahelo]
Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery; ary maro no mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana;
Ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valin'ny fanarahako ny tsara.
Aza mahafoy ahy,Jehovah ô; Ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy.Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô.
Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô.